Somaliska: Waxa aad u baahan tahay in aad ka ogaato wajiga 4 – Sydsvenskan
Somaliska: Waxa aad u baahan tahay in aad ka ogaato wajiga 4
Wajiga afaraad ee tallaalka ayaa iminka ka bilaabmaya gobolka Skåne. Laga bilaabo Isniinta 17 May, intiina da'doodu tahay 50 ilaa 59 waxaad waqti u qorshaysan kartaan tallaalkiina koowaad ee cudurka covid. Waa kuwan jawaabaha laga bixinayo qaar ka mid ah su'aalaha ugu caado badan.
Waa maxay wajiga 4?
Tallaalka shacabka ugu ballaaran ee soo haray: 470,000 oo reer Skåne oo da'doodu tahay 18 ilaa 59 sano.
Sidee ayaan anigu u ogaan doonaa goorta aan qorshaysan karo?
Qof walba waxuu kaar boosto ka heli doonaa Gobolka Skåne, si loo hubiyo in ay iyagu shaki la'aan ku helaan macluumaadka.
Laakiin waxuu gobolku weliba carrabka saarayaa: “… in aadan u baahnayn in aad tan sugto si aad u qorshaysato waqtiga tallaalkaaga. Goorta ay noqoto markaaga ee aad qorshaysan karto, waxay tani si cad uga muuqan doontaa barta 1177.se.”
Goormee ayaan bilaabi karaa in aan qorshaysto?
Dadka da'doodu tahay 50 ilaa 59 ayaa safka hore ku jira. Waxay ka qorshaysan karaan lix meelood oo ay adeegbixiyeyaal khaas ahi dadka ku tallaalaan: Malmö, Lund, Arlöv, Ängelholm, Klippan, iyo Kristianstad.
Goormee ayaa la diyaarin doonaa meelo kaloo dadka lagu tallaalo?
Meelaha dadka lagu tallaalo waxaa si isku daba xigta loo furi doonaa ilaa toddobaadka koowaad ee bisha Juun – ugu yaraan hal magaalo walboo ku taalla gobolka Skåne, iyo dhowr magaalooyinka ugu ballaaran. Wadar ahaan, dadka ku jira wajiga afaraad waxay tallaalladooda ka heli karaan qiyaas ahaan lixdan meelood.
Sidee ayaan u qorshaysanayaa oo goormee ayaan bilaabi karaa in aan waqtiyada baaro?
Barta 1177.se waxaa ku yaalla bog ay ku qoran yihiin macluumaadka ku saabsan wajiga 4 iyo adeegbixiyeyaasha khaaska ah ee qandaraas ka haysta Gobolka Skåne. Halkaas waxaad ka gaari kartaa nidaamka qorshaynta ee tallaal bixiyeyaasha kaladuwan.
Waxaad weliba toos uga qorshaysan kartaa baraha internetka adeegbixiyeyaasha.
Nidaamka Bank-ID loogama baahna halkaas ama barta 1177.se si ay u suurtogasho in la qorshaysto.
Miyaa annaga naloo kala saari doonaa kooxo kaloo da'da u kala baxsan ka dib kooxda 50-59?
Haa, kooxda da'da ee ku xigta waxay noqon doontaa 40-49, iyo wixii ku xiga, iyadoo da'da hoos loogu degayo. Kooxda ugu horraysa, 50-59, waxaa ku jira qiyaas ahaan 150,000 oo qof.
Bisha August, waxaa lagu tala jiraa in dhammaan dadka qaangaarka ah ee gobolka ay u suurtogashay in la tallaalo.
Imisa reer Skåne ayaa weli sugaya tallaalka?
Waxaa iminka gobolka jooga dad aad uga badan 470,000 oo da'doodu tahay 18-59. Laakiin wajiga 4, annagu kuma xisaabinayno shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka, iyo weliba dadka ku jira kooxaha halista leh, oo hore loo tallaalay. Weliba, tallaallada dadka wajiga 3 (60-64) ayaa weli socda, iyo weliba qaar ku jira wajiga 2. Wadar ahaan, qiyaastii 600,000 oo qof oo jooga gobolka Skåne ayaa weli sugaya tallaalka.
Waayo ayuu waqti sidaas u dheeri ugu dhexeeyaa tallaalka koowaad iyo midka labaad?
Waxaa la caddeeyey in tallaalka koowaadi uu wax taro labo ama saddex toddobaad ka dib uun. Tallaalka labaad waxaa lala sugi karaa xoogaa bilood.
Ballanta qiyaasta 2 ee tallaalku waxay noqon doontaa lix toddobaad ka dib midda koowaad. Tallaalkaaga koowaad qorshayso si qiyaasta labaad ee tallaalku aanay kaaga dhex galin safarrada ama waxyaabaha kale.
Waa midkee tallaalka aan heli doono?
Boqolkiiba 85 tallaallada la keenayo Iswiidhan toddobaadyada soo socda waxay noqon doonaan kuwa Pfizer. Inta soo hartay ee boqolkiiba 15 waxay noqon doontaa kuwa Moderna, inkastoo marka hore kuwan la siin doono dadka helay qiyaasta koowaad ee tallaalka Moderna.
Lama keeni doono tallaallo cusub oo ah Astra Zeneca, laakiin waxaa yaalla qiyaaso ku filan si loo siiyo dhammaan dadka heli doona qiyaasta 2 ee tallaalka. Sida uu gobolku sheegay, “waxaan raacaynaa talooyinka Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha, oo kuma tala jirno in aan joojinno tallaalka Astra.”
Miyaan anigu heli karaa shahaadada cagaaran ee Midowga Yurub ka dib marka hal jeer uun la i mudo?
Haa. Xataa uma baahnid in aad is tallaasho si aad u hesho shaahadada cagaaran ee dijital ee Midowga Yurub, taasoo la sugayo in la bilaabo bartamaha Juun. Shahaadadu ma muujin doonto oo keliya macluumaadka qiyaasta tallaalka, laakiin waxaa weliba ku jiri doona caabuqyada covid ee hore loo qaaday iyo natiijooyinka baaritaanka ee lagu waayey.
Laakiin waxaa kaladuwanaan kara waxa uu qofka haysta ugu qalmayo marka la eego macluumaadka ku jira shahaadada. Waddan walba ayaa ka go'aan gaaraya shuruudaha gaarka u ah ee safarka loogu gelayo. Inkastoo hal waddan uu u baahan karo tallaal buuxa, haddana mid kale ayaa laga yaabaa in uu ku faraxsan yahay natiijo baaritaan cusub oo lagu waayey cudurka covid. Waxay dhammaanteed ku xiran tahay tirada caabuqyada ku jira waddanka aad ka safrayso laftigiisa.
Detta en något förkortad översättning till somaliska av en tidigare publicerad artikel: Nu ska en halv miljon skåningar vaccineras – detta bör du veta om fas 4.